Tamar nadiif ah Columbus
Tamarta Nadiifinta ee Columbus ayaa bilaabay! Ku soo dhawoow magaalada 100% barnaamijka tamarta nadiifka ah ee Ohio, oo ay u codeeyeen oo ay ansixiyeen dadka deegaanka Noofambar 2020.
COLUMBUS tamar nadiif ah
Tamar Nadiif ah Barnaamijka Columbus waxa ay door weyn ka ciyaartaa abuuritaanka mustaqbalkeena waara anagoo adeegsanayna Isku-darka Xulashada Bulshada sida habka Magaaladu qandaraaska tamarta iyada oo ka wakiil ah dadka degan iyo ganacsiyada yaryar.
Iyada oo la adeegsanayo isku-darka doorashada bulshada iyo abuurista baahi weyn oo loo qabo ilo tamar la cusboonaysiin karo, Columbus waxay taageeri kartaa shaqooyin wanaagsan iyo horumarinta xoog shaqaale ee warshadaha tamarta nadiifka ah.
Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan BARNAAMIJKA ISKU IRARKA, FADLAN KA SOO wac "AEP ENERGY" 1-888-307-0264
Soo saarista iyo dhisida tamar nadiif ah
Tamar nadiif ah oo ku socota tamartayada
Bixinta tamarta guryaha iyo ganacsiyada yaryar & ilaalinta khadadka
Isticmaalka tamarta nadiifka ah, ilaalinta deegaanka
Tamarta Nafiista ah
Wakhti xaadirkan waxaa jira laba goobood oo tamar nadiif ah soo saara oo lagula jiro qandaraas. Atlanta Farms Solar oo...
Duqa magaalada Columbus Andrew J. Ginther ayaa balan qaaday dadwaynaha Columbus in 100% dib loo cusboonaysiin doono marka la gaadho 2022, iyo sidoo kale balan qaadka iyo yoolka bulshada Columbus in ay dhexdhexaad ka ahaadaan kaarboonka 2050ka.
hel 100% tamar la cusboonaysiin karo
Isku qor barnaamijka tamarta Nadiifinta ee Columbus oo hel 100% tamar nadiif ah oo ku salaysan Ohio.